सताक्षी गोल्डकपको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जित्यो - News20 Media
सताक्षी गोल्डकपको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जित्यो
February 23, 2020 February 23, 2020 N20LeaveaComment on सताक्षी गोल्डकपको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जित्यो
झापा । झापाको झिलझिलेमा सम्पन्न सताक्षी गोल्डकपको उपाधि मछिन्द्र क्लबले जितेको छ । ‘ए’ डिभिजन च्याम्पियनसमेत रहेको मछिन्द्र क्लबले आज(आइतबार) फाइनलमा थ्रीस्टार क्लबलाई १–० ले हराउँदै प्रतियोगिताको उपाधि हात पारेको हो । मछिन्द्रले थ्री स्टारलाई हराउँदा विमल घर्तीमगरको गोल निर्णायक बन्यो ।
खेलको दोस्रो मिनेटमा मछिन्द्रका एडिलेजा सोमिडेलाई थ्री स्टारका खेलाडीले ‘फल’ गरेपछि मछिन्द्रले पेनाल्टीमा पाएको अवसर सदुपयोग गरेको थियो । मछिन्द्रका लागि विमल घर्तीमगरले पेनाल्टीमा गरेको गोल जितका लागि निर्णायक बन्यो । थ्री स्टारले सताक्षी स्पोटिङ क्लबलाई हराएर फाइनलमा पुगेको थियो ।
त्यस्तै ‘ए’ डिभिजनको च्याम्पियनसमेत रहेको मछिन्द्रले सेमिफाइनलमा बलियो प्रतिद्वन्द्वी विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई हराउँदै फाइनल प्रवेश गरेको थियो । उपाधि विजेता मछिन्द्र क्लबले ६ लाख रुपैयाँ पाएको छ भने उपविजेताले थ्री स्टार तीन लाख पाएको छ ।
‘सिप्यान क्रिकेट अवार्ड’ २१ चैतमा
त्रिकोणात्मक सिरिज : ढुक्क हुनुस् ! यसकारण आज नेपालले अमेरिकालाई हराउँने छ ( शक्दो शेयर गरौ )
भारतमा तहल्का मचाउदै नेपाली चेलि ! साबित्रा एक्लैले ठोकिन् ५ गोल
January 28, 2020 January 28, 2020 N20
नेपालले अमेरिकाविरुद्ध टस जितेर बलिङ गर्दै ! यो जित कस्को ?
February 12, 2020 February 12, 2020 N20